प्रधानमन्त्रीज्यू, जनप्रतिनिधि सबै विदेशमा छन्, देश कसले चलाइरहेछ ?
गत एक-दुई महिनाभित्र मात्रै पचासभन्दा बढी उच्च सरकारी अधिकारीहरू बेलायतमा भेटिए । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, शक्ति बस्नेत र थममाया पुनजस्ता मन्त्रीदेखि न्यायाधीशसम्म र उपसभामुखदेखि मन्त्रालयका सचिबसम्म धेरै व्यक्ति लामो समय यतै बरालिए । भिसा नपाइएकाले यो सूचीमा रवीन्द्र अधिकारी परेनन् ।
देश गरिब छ । साधनस्रोत सीमित छन् । गर्नुपर्ने धेरै छ । मन्त्री र कर्मचारीलाई एक मिनेट फुर्सद् नहुनु पर्ने हो । विश्वका प्रायः सबै देशले यस्तो अवस्थामा गर्ने भनेको अत्यावश्यक सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र फजूल खर्चमा कटौती नै हो ।
नगरी नहुने भ्रमणहरू यसभित्र कति होलान् ? प्रायः हरेक देशमा दूतावास छ नै । ती देशसँगको औपचारिक द्विपक्षीय सम्बन्ध त्यसले राखिहाल्छ । लाखौं रुपैयाँ भ्रमणभत्ता लिएर ती मन्त्री या कर्मचारी प्रायः नेपाली समुदायका भेला, भोजभतेर या राजनैतिक कार्यक्रममा खादा लगाउन र भुइँफुट्टे भाषण गर्नमै मस्त देखिन्छन् ।
बजारमा सजिलै पचास हजारमा पाइने टिकट तिनले दुई लाखमा किनेको देखिन्छ । ती दूतावास ओगटेर बस्छन्, सम्मान र स्वागतका नाममा दूतावासलाई अनावश्यक कार्यक्रम गर्न लगाउँछन् र दूतावासको नियमित काममा असर पुऱ्याउँछन् । गत साल आरजू देउवाले लण्डन दूतावासलाई महिना दिनभन्दा बढी निजी निवासजस्तै दुरुपयोग गरेकी थिइन् । त्यो सानो उदाहरण हो ।
उदाहरणका निम्ति काठमाडौंका मेयरलाई लिनुहोस्, उनी देशमा भन्दा विदेशमा बढी देखिन्छन् । उनी विदेश नगए काठमाडौंले के गुमाउँछ ? उनी जापान गए, कोरिया गए, चीन गए.. । काठमाडौंले के पायो ?
साभारः गाउँलेको फेसबुक स्टाटसबाट